Home – HormoodNews
Taariikh Nololeedka Madaxweynaha La Doortay Ee Somaliland Oo Kooban
11/21/2017 by HormoodNews Comments are Disabled
Hargaysa (HMN): Madaxweynaha la doortay ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi, ahna gudoomiyaha xisbiga talada haya Somaliland Kulmiye wuxuu ku dhashay miyiga Hargeysa 1948. Wuxuu waxabarashadiisii Quraanka, dugsiga hoose iyo dhexeba uu ku qaatay magaalada Hargeysa. Dugsiga sare ee Cammuud ee Borama ayuu ka qalin jebiyay 1970-kii. Ka dib wuxuu ku […]
Ciidamo Milateri Ah Oo Lagu Daadiyay Jidadka Magaalooyinka Hargaysa Burco iyo Ceerigaabo
Hargaysa (HMN): Iyadoo la filayo in qadar daqiiqado ah kadib lagu dhawaaqo natiijadda hor dhaca ah ee doorashadda madaxtooyadda Somaliland ayaa waxaa magaaladda Hargaysa si weyn looga dareemayaa dhaq dhaqaaqyo ciidan. Waxaana jidadka waaweyn iyo meelaha is-goysyadda ah lagu arkayaa ciidamo milateriya oo ku labisan dirayska koofiyad casta loo yaqaano […]
Natiijadda Doorashadda Madaxtooyadda Somaliland Oo Lagu Dhawaaqay iyo Tiradda Codadka Lagu Kala Badiyay
Hargaysa (HMN): Gudiga doorashooyinka qaranka Somaliland ayaa hadda shaaciyay in doorashadii madaxtooyadda ee 13-kii bishan ka dhacday dalka uu ku guulaystay xisbiga Kulmiye, isla markaana musharaxiinta xisbiga Kulmiye ay ku guulaysteen. Komishanku waxay sheegeen in musharaxa jagadda madaxweynaha uu ku guulaystay Muuse Biixi Cabdi Xil-diid, halka jagadda madaxweyne ku-xigeenkana uu […]
Komishanka Doorashooyinka Oo Shaaciyay In Ay Berito Ku Dhawaaqayaan Natiijadda Doorashadda
Hargaysa (HMN): Gudiga doorashooyinka qaranka Somaliland ayaa la filayaa in ay berito subaxnimadda ku dhawaaqaan natiijadda hor dhaca ah ee doorashadii madaxtooyadda oo dalka ka qabsoontay 7 maalmood ka hor. Sida lag soo xigtay masuuliyiin ka tirsan komishanka doorashooyinka ayaa caawa warbaahinta u sheegay in ay dhamaystireen gebi ahaanba tirintii […]
Musharax Cirro Oo Qaadacay Cadeeyay-na In Aanay Aqbali Doonin Natiijadda Doorashadda
11/20/2017 by HormoodNews Comments are Disabled
Hargaysa (HMN): Musharaxa madaxweynaha ee xisbiga Waddani C/raxmaan Maxamed C/laahi (cirro), ayaa shaaciyay in ay gebi ahaanba qaadaceen doorashadii madaxtooyadda ee Somaliland ka dhacday 13-kii bishan November. Wuxuu sheegay in doorashadaasi ay ahayd mid ay hadheeyeen musuq maasuq iyo ku shubashooyin baahsan, caruur da’doodu yar tahay oo codaysay iyo in […]
Xukuumadda Somaliland Oo Xayiraadii Ka Qaaday Kalsan TV
Hargaysa (HMN): Xukuumadda jamhuuriyadda Somaliland ayaa xayiraadii ka qaaday telefishanka Af-Soomaaliga ku baahiya wararka ee Kalsan oo laga leeyahay dalka dibadiisa gaar ahaana xaruntiisu tahay magaaladda London, kana hawl gala goboladda Somaliland. Kaasoo ay xukuumadda Somaliland xayiraad xagga shaqadda ah saartay 3-dii bishan, kadib markii lagu eedeeyay in uu baahiyay […]
Musharaxa UCID Oo Tallo Waayelnimo Oo Wax Ku Ool ah Jeediyay Kana Hadlay Xaaladaha Siyaasadeed Ee Dalka Ka Taagan
Hargaysa (HMN): Musharaxa madaxweynaha ee xisbiga UCID Eng. Faysal Cali Waraabe, ayaa markii u horaysay ka hadlay xaaladaha siyaasadeed ee maalmahan ugu danbeeyay dalka ka taagan gaar ahaana muranka ka taagan natiijada doorashadii madaxtooyadda. Wuxuu sheegay in aan maanta laga filaynin in Somaliland ay reero iyo qabaa’il dib ugu noqoto, […]
Mugabe Oo La Siiyey Ilaa Duhurka Maalinimada Isniinta Inuu Ka Tanaasulo Talada Madaxweynenimada Zimbabwe.
11/19/2017 by HormoodNews Comments are Disabled
Zimbabwe(HMN) Xisbiga talada dalka Zimbabwe haya ee loo yaqaano ZANU-PF ayaa siiyey Robert Mugabe ilaa duhurnimada maalinta berito ah inuu isakaga tanaasulo madaweynenimada dalka Zimbabwe haddii kale waxa lagu maquunin doonaa xoog ayuu yidhi afhayeen u hadlayey xisbigaasi. Afhayeenkan ayaa waxa uu ka hadlayey telefinshanka wadankaasi si toos ah , ka dib […]
Komishanka Doorashooyinka Iyo Gudoomiye Cirro Oo Heshiis Gaadhay.
11/18/2017 by HormoodNews Comments are Disabled
Hargaysa(HMN) Gudoomiyayaasha Xisbiga Wadani iyo Komishanka oo maanta la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in khilaafkii soo kala dhex galay xisbiga Wadani iyo komishanka heshiis is afgarad laga gaadhay. Gudoomiyaha Komishanka oo ka hadlayay ayaa sheegay in isaga iyo gudoomie Cirro ay ka heshiiyeen xaliyeena dhamaanba arimihii ay tabanayeen xisbiga Wadani […]
Komishanka Iyo Hogaamiyaha Wadani Oo Maanta Wadahadalo U Bilaabmay.
11/17/2017 by HormoodNews Comments are Disabled
Hargaysa(HMN) Hogaamiyaha xisbiga mucaaridka ah Ee Wadani Cabdiraxmaan Cirro ayaa sheegay in maanta isaga iyo Komishanka Doorashooyinka uu u bilaabmay shir ku saabsan sidii loo qancin lahaa Xisbiga Wadani. Gudoomiye Cirro ayaa mar uu la hadlayey maxaliga ah sheegay in isaga iyo komishanku u bilaabmay wadahadlo ku saabsan cabasho uu […]